Vaovao - Toetoetran'ireo mpisambotra mahazatra
1. Ny fahaizan'ny arresteran'ny oxide zinc dia lehibe
Izany dia hita taratra indrindra amin'ny fahafahan'ny mpisambotra varotra mandray an-tanana ny tselatra mahery vaika, ny herin'ny herinaratra mandritra ny fotoana tsy voafetra, ary ny fihoaram-pefy. Ny fahafahan'ny fikorianan'ny oksidansa zinc vokarin'i Chuantai dia mahafeno na mihoatra ny fepetra takiana amin'ny fenitra nasionaly mihitsy aza. Ireo tondro toy ny haavo mivoaka amin'ny tsipika, ny fahaizan'ny mitroka angovo, ny fandeferana mahery vaika 4/10 nanosecond ankehitriny, ary ny fahaizan'ny onja 2ms toradroa dia nahatratra ny ambaratonga voalohany.
2. Fiarovana tsara an'ireo mpisambotra oksida zinc
Zinc oxide arrester dia vokatra elektrika ampiasaina hiarovana ireo fitaovana elektrika isan-karazany ao amin'ny rafitry ny herinaratra amin'ny fahasimbana mahery vaika ary manana fiarovana tsara. Satria ny toetran'ny volt-ampere tsy-linear an'ny lovia valizy zinc oxide dia tena tsara, hany ka an-jatony microampere an-jatony no afaka mandalo eo ambanin'ny herinaratra miasa mahazatra, dia mora ny mamolavola rafitra tsy misy banga, mba hanana fiarovana tsara fampisehoana, lanja maivana ary habe kely. endri-javatra. Rehefa manafika ny herinaratra be loatra, dia mitombo haingana ny onja mikoriana amin'ny takelaka misy valiny, ary miaraka amin'izay koa dia voafetra ny amplitude de la voltage mahery, ary mivoaka ny angovo azo avy amin'ny volter-over. Aorian'izany dia miverina amin'ny fanjakana fanoherana avo lenta ny takelaka valin'ny oksida zinc, mba hiasa ara-dalàna ny rafitra herinaratra.
3. Ny fanatanterahana famehezana ny arresteran'ny oxide zinc dia tsara
Ny singa arrester dia mandray palitao mitambatra avo lenta miaraka amin'ny fahombiazan'ny fahanterana sy ny fahateren'ny rivotra, ary ny fepetra toy ny fifehezana ny famatrarana peratra famehezana ary manampy tombo-kase. Ny palitao seramika dia ampiasaina ho fitaovana famehezana hahazoana antoka ny famehezana azo antoka sy ny fahombiazan'ny arrester.
4. Ny toetra mekanikan'ny fisamborana oksida zinc
Iaraho midinika ireto lafin-javatra telo manaraka ireto:
Force Herin'ny horohoron-tany;
⑵Ny tsindry rivotra mahery indrindra mihetsika amin'ny arrester
⑶ Ny faran'ny farany ny arrester dia mitondra ny fihenan'ny tariby azo ekena indrindra.
5. Ny fahombiazan'ny decontamination tsara an'ny arresteran'ny oxide zinc
Ny arresteran'ny oxide zinc tsy misy banga dia mahatohitra fanoherana ny fandotoana be.
Ny haavon'ny halaviran'ny pejy famaritana voafaritry ny fenitra nasionaly dia:
⑴Faritra fandotoana antonony ao amin'ny kilasy II: elanelan'ny creepage 20mm / kv
⑵ Faritra fandotoana be dia be III: elanelan'ny creepage 25mm / kv
⑶ Kilasy faha-IV, faritra fandotoana mavesatra izaitsizy: halaviran'ny creepage 31mm / kv
6. mendri-pitokisana izy amin'ny fisamborana oksida zinc
Ny fahamendrehan'ny fiasa maharitra dia miankina amin'ny kalitaon'ny vokatra ary raha mitombina ny fisafidianana ny vokatra. Ny kalitaon'ny vokatra vokariny dia misy fiatraikany amin'ireto lafiny telo ireto:
A. Ny fahaiza-mandanjalanja amin'ny firafitry ny mpiambina amin'ny ankapobeny;
B Volt-ampere toetra sy ny fahanterana fanoherana toetran'ny zinc oxide valves
C Ny fanatanterahana ny famehezana ny arrester.
7. Fandeferana matetika amin'ny herinaratra
Noho ny antony maro samihafa toy ny fitrandrahana dingana tokana, ny valiny maharitra amin'ny capacitance ary ny fanariam-pako ao amin'ny rafitry ny herinaratra, hiteraka fiakaran'ny herinaratra matetika na hamokatra volavolan-dalàna mandritra ny fotoana maharitra miaraka amin'ny amplitude avo. Ny arrester dia afaka mahazaka matetika ny herinaratra ao anatin'ny fe-potoana iray. Mampitombo ny fahafaha-miasa amin'ny herinaratra.